Shina Multiplayer vavahadin-tsoratry ny tranokala vy vita amin'ny fananganana trano sy mpamatsy | Vondrona mahazatra
1. Iza avy isika?
Izahay dia mpanamboatra matihanina sy lehibe indrindra ho an'ny firafitry ny vy any amin'ny faritany Shandong, Shina,
Azontsika atao ny manolotra ny serivisy amin'ny famolavolana tsara ho fametrahana miaraka amin'ny kalitao tsara
2. Orinasa orinasa na orinasa ara-barotra?
Izahay dia orinasa, ka ny tolotra mifaninana momba ny orinasa dia hatolotra. Ny orinasa anay dia mirakitra faritra 360,000 metatra toradroa. Ny fahafahantsika famokarana dia 150000tons isan-taona
3. Ny antoka sy ny antoka omena?
Niorina fomba fiasa handinihana ireo vokatra isaky ny ambaratonga rehetra amin'ny fizotran'ny famokarana - akora akora, amin'ny fitaovana vita, fitaovana voamarina na voasedra, entana vita, sns.
Raha toa ka misy olana iray kalitao amin'ny tetikasa iray, haverina ny fiantohana 5%.
4. Manolotra fametrahana mitarika amin'ny tranokala any ivelany ve ianao?
Eny, afaka manome ny serivisy fametrahana izahay. Azontsika atao ny mandefa injeniera teknika matihanina sy ekipa hanolotra ny fametrahana amin'ny tranokala any ivelany
Previous: Ny firafitry ny vy vita amin'ny vony vita amin'ny vy vita amin'ny toeram-pambolena
Manaraka: Fanamboarana trano vita amin'ny vy vita amin'ny aloky ny tany
Ny firafitry ny vy maivana
Rafitry ny vatosoa vita